METRO COMPUTER MYANMAR.....
Metro Computer Myanmar သည် Metro Group မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသော Software ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
Metro Group သည် Software များ ရေးသားခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများ အတွက် တည်ထောင်ထားသော Metro Computer Service Co.,Ltd ၊စာအုပ်များ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တည်ထောင်ထားသော Kawasaki Kousan Co. Ltd. (METRO bookstore) စသည့် Business လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုတွင်လည်း Metro Computer Myanmar Co.,Ltd မှ ဦးစီး၍ Metro IT & Japaense Language Centre ကို တည်ထောင်ထားပါသည်။ သင်တန်းကျောင်း၌ System Creator ၊ PC Design Creator ၊ IT Office Management စသည့် IT နည်းပညာများကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း သင်ကြားမှု့ပုံစံအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွယ်ကူစွာ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာစကား သင်ကြားမှု့ သင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိနေပါသည်။
Representative of Metro Group
System Development Section သည် ထူးချွန်ထက်မြက်၍ ပါရမီရှိသော မြန်မာလူငယ် Engineer များ၏ စွမ်းရည်ကြောင့် အများသူငါထက် မြင့်မားသော နည်းပညာစွမ်းရည်နှင့် တွေးခေါ်ကြံဆမှုများ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဤမြန်မာပြည်တွင် အခြေပြုသော ကမ္ဘာတဝှမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးအဖြစ် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသွားရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
တဖက်တွင်လည်း ကျွန်ပ်တို့၏ ကောလိပ်မှ မွေးထုတ်ပေးလိုက်သည့် ထူးချွန်ထက်မြက်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များသည် မြန်မာပြည်တွင်းနှင့် ဂျပန်ပြည်တွင်သာမက ကမ္ဘာအနှံတွင်လည်း အောင်မြင်မှုများရရှိစေရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။
Managing Director of Metro Computer Myanmar Co.,Ltd
Metro Group၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
Metro Computer Services Co.,Ltd
System Development, Sales and maintenance of software packages.
Kawasaki Kousan Co. Ltd. (METRO bookstore)
Book sales and Metro Human Resources Center, which deals with temporary personnel business.
Japanese Langauge,Smart Phone Application,Web System,PC Design Creator,Accounting and Administration Staff,Medical Office Work
Room No(A,B,C,D), 3rd Floor, Kyaw Business Tower Condo, ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
ဖုန်း : 01-372691, 09-262007800